Ethwele GAP-ukuhlaziya inkampani
ibhizinisi Analytics has izinhlobo ezihlukene, okuyinto ziyasetshenziswa izindawo ezithile. Ukubalwa Indlela Yokwenza is kahle, futhi kukhona izinhlobo engcono yokuhlola uhlobo oluthile amaphutha nekusebenta ibhizinisi. Uma kuziwa ukubikezela umthelela izici ezihlukahlukene ku nenzuzo yeNkampani kanye amathuba ekufezeni Okuqondiwe zezimali, omunye ezivamile futhi isetshenziswa GAP ukuhlaziywa.
Umgomo we amasu breaking
Indlela GAP-ukuhlaziywa kusikisela ukuthi kukhona noma kwakheka igebe amasu phakathi kwamazinga oluqagelwe uqobo nemingcele oyikhethile ukusebenza kwamabhizinisi. Njengoba i sibalo ukuthi ayemakhulu amathemba ababenawo umgomo ezihlose impumelelo ezingenza ukuphathwa ufuna ukufeza inhlangano ukwenza ibhizinisi. Ngaphansi exponents yangempela waqonda impumelelo yangempela ibhizinisi kuleli ihlaziye isiqondiso yasensimini.
Kumele kukhunjulwe ukuthi sisho ezingeni ozinzile esithathwe ngesikhathi kukhona ukusebenza zamanje kwenqubomgomo, kunokuba ukusebenza isiqongo, kuye ngamaphuzu okungahleliwe. Ngomqondo ongokomfanekiso, indlela GAP ukuhlaziywa iyona "kuhlasela" okuhloswe ngaso nokuqedwa sokungalandeli umthetho (igebe) obuphakathi imiphumela ehlosiwe futhi langempela inkampani.
Ingqikithi indlela ngenxa yokwephula isibonelo ukhonkolo
Ngokuvamile abahlaziyi ibhizinisi unezinkinga uma they buza lokufeza GAP-ukuhlaziywa. Isibonelo kusetshenziswa indlela igebe credit izikhungo kuyinto ukwambulwa kakhulu futhi kulula sasivumela ukuqonda. Ngokuvamile, esikhathini esifushane ukuthi quantified umthelela izinga ukulungiswa ku eziseceleni sokugcina, okubhekiselwa kuzo nangokuthi net isithakazelo engenayo (net isithakazelo imali). Njengengxenye GAP-ukuhlaziywa kungashiwo imelelwa umehluko "Isithakazelo engenayo" futhi "Isithakazelo izindleko".
UNYAKA WE-GAP = RSA - RSL,
lapho, ngaphansi RSA libhekisela ebucayi yezinguquko isithakazelo emakethe amanani kwempahla kanye RSL - ubhale izinkinga ezihilelekile. UNYAKA WE-GAP sivezwe kula magama ngokuphelele - lwemali amayunithi.
eziphumayo IBC (loan inter-yasebhange);
ukubolekisa ngokuya sokukhishwa ohlinzekela isibukezo inani lenzalo;
izibambiso yesikhathi esifushane;
ukubolekisa ngaphansi 'elintantayo' senzalo.
Ukuze RSL zihlanganisa:
idiphozi sivumelwano benethuba isibukezo amazinga;
izibambiso nge "ezintantayo" isilinganiso;
ezifakwa nge "ezintantayo" inzalo.
Lokho kusho ukubaluleka etholwe GAP
Njengoba singabona kusukela isibonelo ngenhla, GAP-ukuhlaziya ebhange kuhilela ukuthola umehluko bobukhulu ngaphakathi kwezinombolo ngokuqondene nezimpahla kanye nezikweletu. Inani okuholela kungenzeka omuhle, hlangothi noma engemihle. Sicela uqaphele, ebonisa omuhle akuqinisekisi impumelelo. Njengengxenye GAP-ukuhlaziywa ke ebonisa ukuthi inani lenzalo ebucayi amafa ebhange uye wenza okungaphezu ubhale izinkinga ezihilelekile.
Uma ukubaluleka mkhulu kunezinhliziyo 0, kuyilapho ekuphumeni zenzalo, inkampani uzothola engeziwe okwenza inzuzo, esimweni okuphambene - ohlangothini isithakazelo uzokwehla. Lapho GAP alivumi, ibhange stock enkulu nezikweletu kuka izimpahla, iyashesha ukuzwela uma izinga. Ngakho, ukukhula isilinganiso emakethe kunciphisa NII, bese wehlise izinga isivuno sizoba ukukhula. Icala lapho GAP zero - luyingxenye yezinto futhi kusho ukuthi ushintsho emakethe zenzalo has namthelela net isithakazelo imali.
izidingo Functional uhlelo lokulawula ibhizinisi
Lapho intelligence iqinile GAP omuhle, umphathi kumelwe ukwandisa inani amafa eside waphila, nge strong senzalo. Ngo parallel, inhloko liyadingeka ukwandisa kuphothifoliyo izikweletu zesikhathi esifishane nempendulo okusezingeni eliphezulu emakethe senzalo. Lelisu ikuvumela ukuba uthole izivumelwano imali eningi kakhulu, futhi ulahlekelwe kancane ezikweletini.
Lapho GAP isethelwe ngaphansi kuka-zero, izinyathelo nokunciphisa umthelela senzalo simo esishubile emakethe kumele abe umlingisi ezahlukene. Ziyakwazi kulula ukunquma by Isifaniso izenzo uma GAP omuhle. Lapho indlela igebe ukuze iphothifoliyo sikhombisa ukubaluleka esondele ku-zero, kubalulekile ukuba ngonanzelelo izinguquko kwesizini ukuziphatha base ikhasimende futhi esekelwe umhlahlo, ukwenza amalungiselelo yokululama zezici esidala ukungazinzi.
Ubuqili isicelo igebe amasu practice
Ukukhetha izimpendulo yasebhange kuye ngokuthi isimo emakethe - akunjalo kuphela lapho GAP-ukuhlaziywa sisetshenziswa. izidingo Functional uhlelo kumaphrojekthi yangempela yabonisa impela eningi, kodwa izinga umthelela zenzalo izinto ngazinye ngokuqondene nezimpahla kanye nezikweletu akuyona iyunifomu. Ezinye zazo aphendule emakethe kushintsha kakhulu, futhi enye - kancane.
Endaweni okubalulekile ukusetshenziswa GAP-ukuhlaziywa ukuhlola umphumela izinguquko zangaphambilini kanye kumiswa database olulodwa kwezibalo. Ngokuzayo lizokuvumela ukuhlonza iziyisikhombisa ephumelela kunazo kwethonya uhlelo futhi ukwandisa inkomba izinga izincomo umnyango kohlaziyo of ukuphathwa kwenkampani.
Amathiphu ambalwa for GAP Management
Uma sicabanga ngakho konke okungenhla, izimiso ezilandelayo wesi:
Ukusekela kuphothifoliyo okuhlukahlukene by imikhakha, imigomo amazinga. Ukuze wenze lokhu, ukuqoqa inombolo enkulu kwamatayitela futhi nezivumelwano zezikweletu, okuyinto kulula ukuba kusebenze emakethe.
Ukudala spetsplanov ku ukuthengiselana nge isigaba ngasinye ngokuqondene nezimpahla kanye nezikweletu, ne ezihlukahlukene ezimweni in a ingxenye ethile zokuphatha.
yokuqinisekisa eningiliziwe isimo emakethe. Akukhona njalo ushintsho mkhuba ukunyakaza amazinga kungukuqala izinguquko eyindilinga emakethe. Kungenzeka ukushintsha kancane, kodwa ngeke yokusabela uvalo kuholele ekulahlekelweni inzuzo babhebhethekisa ukungalingani ekhona.
Umugqa Mkhiqizo nokubaluleka kwalo kule ukuhleleka kuka imikhiqizo kanye nezinsizakalo
Izinkomba ezisemqoka kwezomnotho ibhizinisi - izindleko egcwele ukukhiqizwa
Izindlela zocwaningo ukumaketha
I-Electronic Cigarette Yokwenza: I-Manufacturing Instruction
Ithuthukisa ubuhle noma ukukhiqizwa kabusha orchid ekhaya
Anatomy futhi izitho zomzimba: ukubukeka amaqanda amadoda
Hermitage - Museum Petersburg. Ikheli, izithombe kanye nokubuyekeza
Inthanethi "Tricolor" - Ukufinyelela kuwo wonke
Dzhon Gilgud: izithombe, Filmography, empilweni yakho, biography
Ukuphefumula kwezitshalo kwenzeka emaqenjini ezitho. Emangqamuzaneni aphi izitho zokuphefumula ezenzeka ezitshalweni?
Izindlela Simple. Bephakamisa indlela. imishini Simple ekuphileni kwansuku zonke
Abandoned ongaphansi komhlaba esiteshini eMoscow: legend of the Moscow Metro
Umqondo Ukuvikelwa zabasebenzi ngesikhathi ibhizinisi